Raha mandinika ny boky an-tserasera ianao, dia handinika ny tranokalanao na ny bilaoginao izahay ary hanome anao valiny mahasoa momba ny famolavolana, ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny fanatsarana ny fiovam-po ary ny fiantraikany amin'ny ankapobeny. Izahay koa hanao soraty amin'ny lahatsoratra izany ary hazavao amin'ny mpamaky izay ataonao. Izahay dia nanao an'ity bilaogy ity taloha ary niantso azy hoe "Blog Tipping"… ary nanao lahatsoratra tsara ry zareo!
11 Septambra 2010 à 1:34
Salama ry zalahy, mahafinaritra ny mahita anareo ato amin'ny Blog Indiana ary misaotra anao nitondra rano vitamina ho ahy. Vao miditra ao amin'ilay boky aho, ary izany no nampanantenainy azy rehetra.